लक्ष्मीको पूजाआजा गर्दा धन प्राप्त हुन्छ ? के छ यसको अर्थ ? -
लक्ष्मीको पूजाआजा गर्दा धन प्राप्त हुन्छ ? के छ यसको अर्थ ?
हामीकहाँ लक्ष्मीलाई धनकी देवी मानिन्छ । ज्ञान, शक्ति र धन तीन कुराले पूर्णता हुनु नै जीवनको सार्थकताका रुपमा बुझिन्छ । यसर्थ, ज्ञान र शक्ति जति अपरिहार्य छ, उति नै धन पनि ।के लक्ष्मीको पूजा गर्दा धन प्राप्त हुन्छ ?वास्तवमा पूजा भनेको श्रम र साधना हो । कुनै पनि प्राप्तिका लागि गरिने सार्थक श्रम र साधना नै खासमा पूजा हो । चाणक्य नीतिअनुसार लक्ष्मीपूजाको अर्थ साधना, श्रम र मिहिनेत हो ।
चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘फोहोर बस्त्र लगाउने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, कटुभाषी, क्रोधी, खर्चालु, शौखिन व्यक्तिलाई लक्ष्मीले त्याग गर्छिन् ।’ साथै, सूर्योदय र सूर्यास्तका बेला सुत्ने व्यक्तिलाई लक्ष्मीले रुचाउँदिनन् ।यो भनेको, स्वस्थ, फूर्तिलो, सफा, परिश्रमी र मिहिनेती हुनुपर्छ भन्ने हो ।
धन आर्जन गर्ने सूत्र पनि यही हो । अहिले विश्वमा जे जति धनाढ्य छन्, उनीहरुले कठोर लगाव, परिश्रम, सिर्जनशीलताकै आलोकमा टेकेर माथि उठेका हुन् । लक्ष्मीलाई प्रशन्न बनाउनका लागि सही समयमा सही ठाउँमा लगानी गर्न जान्नुपर्छ । लगानी गरिने क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान, अनुभव, सीप, सामथ्र्य र लगाव हुनुपर्छ । लक्ष्मी खुशी पार्न कुवेरको प्रतिमा राख्ने, नरिवल चढाउने धार्मिक परम्परा छ । यससँगै मुंगा, कौडा, शंख आदि चढाउनुपर्छ भनिन्छ । यी सबै सुख-समृद्धिका प्रतिक हुन् ।
अँध्यारोमा प्रकाशको उदय तिहारलाई झिलिमिली चाड पनि भनिन्छ । यसबेला दीप प्रज्वलन गर्ने अर्थात् झिलिमिली बिजुली बत्ति बाल्ने गरिन्छ । रंगीचंगी बत्तीको प्रकाशले औंशीको रातलाई पनि उज्यालो बनाउँछ । तिहारमा घर सफा सुग्घर बनाउने, भाँडा बर्तन सफा गरेर सजाउने, फूलमालाले सजाउने, रंग रोगन गर्ने, रंगोली बनाउने गरिन्छ ।
अतः विभिन्न प्रकारका फलफूल, मिठाई अर्पण गर्दै लक्ष्मीको पूजाआजा गरिन्छ । तिहार कात्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीबाट सुरु हुन्छ । सुरुको दिनलाई काग तिहार भनिन्छ । यतिबेला कागलाई पूजा गर्ने, खानेकुरा दिने चलन छ । त्यसपछि कुकुर तिहार, गोरु तिहार, गाई तिहार, लक्ष्मी पूजा र भाइटीका मनाइन्छ ।
कात्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथिको भाइटिका मनाएसँगै तिहार सम्पन्न हुन्छ । यसकारण यमपञ्चक पौराणिक कथन यस्तो छ, सूर्यका छोरा यमराजले बहिनी यमुनाको निम्तो स्वीकारेर बहिनीको घरमा गई रमाइलो गरेका थिए । यस क्रममा यमुनाको आतिथ्यबाट प्रशन्न भई यमराजले बहिनीलाई भने, ‘जे मन लाग्छ माग ।’
यमुनाले भनिन्, ‘हरेक वर्ष आजको दिन मलाई भेट्न आउनुपर्छ दाजुभाइ-दिदीबहिनीको सम्बन्ध प्रगाढ होस् । दाजुभाइको आयु, कीर्ति बढोस् ।’यमराजले पनि तथास्तु भने र मनसा, वाचा, कर्मणा एवं शुद्ध चित्तले भाृतपूजा गर्ने/गराउनेको उन्नती हुने बताउँदै बिदा भए । यही धार्मिक मान्यतासँगै सदियौंदेखि तिहार मनाउने प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ ।
प्रिय ! पर्खिएरै १४ बर्ष बिते, तिमी आएनौ ! ‘तिमी ह...
मिर्गौला पीडितलाई सहयोगको अपिल...
आजको राशिफल / वि.सं. २०७४ माघ १६ गते मङ्गलबार...
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ भाद्र ०९ गते शनिबारको रा...
अब नेपाल बन्द हैन नेपाल बन्दै छ,बन्दलाई सधैको लागि...
ब्लड क्यान्सर पीडित सरोजलाई उपचारमा आर्थिक समस्या...
Prevएउटै ढुंगाबाट बनेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शिव लिङ्ग सेयर गरेको १० मिनेट मा सुखत समाचार सुन्नुहुनेछ